कम्पनी विश्लेषण सिटी डेभलपमेण्ट बैङ्क लिमिटेड | गृहपृष्ठ
Home लगानी कम्पनी विश्लेषण सिटी डेभलपमेण्ट बैङ्क लिमिटेड
on: १२ माघ २०६८, बिहीबार ००:०० लगानी
सिटी डेभलपमेण्ट बैङ्क लिमिटेड
कम्पनीको नाम: सिटी डेभलपमेण्ट बैङ्क लिमिटेड
वर्गीकरण: विकास बैङ्क
सम्पर्क कार्यालय: चिप्लेढुङ्गा, पोखरा
स्थापना: २०६४ कात्तिक २
अध्यक्ष: राजेन्द्रकुमार बाटाजु
सीईओ: विश्वमोहन अधिकारी
स्वदेशी लगानीकर्ताको संलग्नतामा क्षेत्रीय स्तरको विकास बैङ्कका रूपमा स्थापना भएर कारोबार गरिरहेको यस बैङ्कले विस्तारै आफ्नो कार्यक्षेत्र बढाउने लक्ष्य लिएको छ । हाल यो बैङ्कको शाखा पोखराको ट्याक्सी चोक, अमरसिहं चोक , हेम्जा र तनहुँको भीमाद बजार र लमजुङको भोटेओडारमा छन् ।
कृषि, उद्योग, व्यापार तथा अन्य क्षेत्रको विकास तथा विस्तार गर्न मुलुकमा छरिएर रहेको पूँजीलाई जम्मा गरी संस्थागत लगानी गर्दै स्वच्छ र पारदर्शी वित्तीय सेवा प्रदान र्गने उद्देश्यले यो बैङ्क स्थापना भएको संस्थापकहरूले बताएका छन् ।
करीब २ वर्ष अगाडि २०६६ माघ १९ मा यो बैङ्कले सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई लक्षित गरी रू. सय अङ्कित मूल्यका ६ लाख कित्ता साधारण शेयर निष्काशन गरेको थियो । साधारण शेयर निष्काशन गर्नुभन्दा अगाडि रू. १४ करोड रहेको यो बैङक्को चुक्ता पूँजी हाल रू. २२ करोड पुगेको छ ।
आव २०६७÷६८ का लागि यो बैङ्कले लगानीकर्ताहरूलाई १० प्रतिशत बोनश शेयर र ६ दशमलव ५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको छ ।
यो कम्पनीको १ सय ८० दिने शेयरमूल्यको ट्रेण्डलाई आरएसआई चार्टद्वारा विश्लेषण गर्दा यसको शेयर अहिले ओभरसोल्ड जोनमा देखिएको छ ।
यस कम्पनीको शेयरमूल्यका आधारमा बनेको आरएसआई रेखा अहिले स्केल २१ मा भएकाले शेयरमूल्य ओभरसोल्ड जोनमा देखिएको हो । बैङ्कको पाँचौं वार्षिक साधारणसभा र नगद लाभांशको दर्ता पुस्तिका बन्द भइसकेकाले हाल शेयरमूल्य ओभरसोल्ड जोनमा देखिएको हुन सक्छ ।
यो शेयर खरीद गर्न चाहनेहरूका लागि अहिले उपयुक्त समय देखिन्छ भने विक्रीकर्ताहरूले केही समय प्रतीक्षा गर्न उपयुक्त हुन्छ ।
चालू आव २०६८÷६९ को अपरिस्कतृ दोसा्रे त्रमौसिक वित्तीय विवरणअनुसार यस बैङ्कको चुक्ता पूँजी रू. २२ करोड छ ।
सो त्रैमाससम्म बैङ्कले रू. १ करोड ५९ लाख खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ, जुन गत आवको सोही अवधिको तुलनामा १४ दशमलव ३१ प्रतिशत कम हो । गत आवको तलु नामा बैङक्को चुक्ता पूँजी १० प्रतिशतले वृद्धि भए पनि सोहीअनुरूप मुनाफामा वृद्धि हुन नसकेकाले यसको मूल्य–आम्दानी अनुपातमा वृद्धि देखिएको हो ।
त्यसैगरी, बैङ्कको जगेडा कोष पनि गत आवको सोही अवधिको तुलनामा १६ दशमलव २१ प्रतिशतले घटेर रू. ५ करोड ७६ लाखमा सीमित भएको छ । मुनाफा र जगेडा कोषमा आएको कमीले गर्दा बैङ्कको वित्तीय अवस्थामा नकारात्मक प्रभाव बढ्दै गएको देखिन्छ । मुनाफा र जगेडा कोषमा सुधार नभए बैङ्कले आव २०६८÷६९ मा लगानीकर्ताहरूलाई वितरण गर्ने प्रतिफलदरमा कमी आउने निश्चित छ ।
त्यसैगरी, गत आवको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा निक्षेप सङ्कलन २८ दशमलव २५ प्रतिशतले वृद्धि भएर हाल रू. १ अर्ब ९५ करोड पुगेको छ । सो अवधिमा बैङ्कको लगानी भने ६९ दशमलव ४८ प्रतिशतले घटेर रू. ३ करोड ३७ लाखमा सीमित भएको छ । यसरी लगानीको दायरा फराकिलो पार्नु पर्ने अवस्थामा लगानी कटौती गर्दा बैङ्कको मुनाफा दरमा कमी आउने सम्भावना बढी देखिन्छ । साथै, ऋण प्रवाहतर्फ भने २५ दशमलव ५१ प्रतिशत वृद्धि भएर हाल रू. १ अर्ब ५६ करोड पुगेको छ ।
सन् २०१० अगष्ट २६ देखि नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा कारोबार शुरू भएको यो बैङ्कको शेयर पहिलोपटक रू. ३ सय २५ मा किनबेच भएको थियो । त्यो मूल्य हालसम्मकै सबैभन्दा उच्च हो । त्यसैगरी, यसको अहिलेसम्मको सबैभन्दा न्यून मूल्य रू. ३ सय १३ कायम भएको छ ।
आव २०६८÷६९ को दोस्रो वित्तीय विवरणअनुसार यस कम्पनीको प्रतिशेयर आय रू. १४ दशमलव ५० छ भने मूल्य–आम्दानी अनुपात ९ गुणा रहेको छ । यसअनुसार यो बैङ्कको शेयरमा लगानी गरी रू. १ आम्दानी गर्न ९ गुणा बढी मूल्य तिर्नु पर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी, यसको किताबी मूल्य रू. १२६ दशमलव १९ रहेको छ ।